प्रसुतीका बिरामीको दैनिक शल्यक्रिया – Click Khabar
प्रसुतीका बिरामीको दैनिक शल्यक्रिया
चितवनः लकडाउनले बिरामी सहज आउन नसक्दा अस्पतालहरुमा अन्य रोगका बिरामीको संख्या न्यून छन् । तर प्रसुतीका बिरामीको उपचार गराउने अग्रणी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा भने अन्य वेलामा भन्दा यतिवेला शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउनेहरुको संख्या वढेको छ ।
सामान्य अबस्थाका गर्भवतीको हप्तामा शुक्रबार र आईतबार मात्र शल्यक्रिया गरेर वच्चा निकाल्ने गरिएकोमा अहिले यो कार्य सार्वजनीक बिदा वाहेक सबै दिन गर्न थालिएको छ । अस्पतालको स्त्री तथा प्रसुती रोग बिभाग प्रमुख डा. शुनिलमणी पोख्रेलका अनुसार अघिल्लो पटक शल्यक्रिया गरेर बच्चा झिकेका, बच्चा उल्टो बसेका जस्ता गर्भवतीको हप्तामा दुई दिन मात्र शल्यक्रिया गर्ने गरेको भए पनि अहिले दैनिक शल्यक्रिया गर्न थालिएको हो । आकस्मीक अबस्थाको भने जुनसुकै वेला शल्यक्रिया गरिदैं आएको छ ।
पालो मिलाएर नियमीत शल्यक्रिया गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलका अनुसार बैशाखमा मात्र ७ सय ५३ जनाले अस्पतालमा बच्चा जन्माएका छन् । जसमध्ये २ सय ७३ जनाको शल्यक्रिया गरिएको हो । गत वर्षको तुलनामा साधारण सुत्केरी संख्या घटेपनि शल्यक्रिया वढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पोख्रेलका अनुसार दैनिक ३० देखि ३५ जना सुत्केरी हुने गरेकोमो यो संख्या २५ देखि ३० मा झरेको छ ।
मकवानपुर र गोरखामा प्रसुती सेवा सुरु गरिएको, स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुती सेवा सुरु भएको, घरमै सुत्केरी गराउने काम सुरु भएको र कोरोनाको गलत प्रचारका कारण साधारण प्रसुती गराउने घटेको तर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जटिल बिरामी वढेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्य वेलामा भन्दा उच्च सावधानी अपनाएर प्रसुती बिभागमा उपचार गरिएको छ । पोख्रेलको भनाईमा सामाजीक दुरी कायम गरि बिरामी राख्नेर उपचार गर्ने गरिएको छ । शंका लागेमा गभएवतीको पिसिआर परिक्षण गराएर मात्र बच्चा झिक्ने गरिएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी काठमाडौंको प्रसुती गृह पछि सबैभन्दा वढी सुत्केरी हुने ठाउँ भएकाले अस्पतालले अहिलेको परिस्थितिमा बिशेष सावधानी अपनाएको बताउनुभयो । अलग्गै भवनमा स्त्री एबं प्रसुती रोग बिभाग छ । अस्पतालमा हाल कोरोनाका बिरामी छैनन् । यस अघि कोरोनाका बिरामी रहेको हुँदा अस्पतालले अपनाउन सुरु गरेको उच्च साबधानीका कारण सबै बिरामी सुरक्षित रहेको तिवारीको दाबी छ ।
यस क्षेत्रमानै उत्कृष्ठ प्रसुती सेवा भरतपुर अस्पतालले दिने भन्दै उहाँले यस कठिन घडीमा पनि कुनै कमी नहोस भनेर बिशेष ध्यान पु¥याईएको बताउनुभयो । अस्पतालमा गत वर्ष १३ हजार ५ सय ४५ जनाले बच्चा जन्माएका थिए । प्रसुती बिभागमा हाल १२ जना बिशेषज्ञ र एम डि गर्दै गरेका ५ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । प्रसुती बिभाग अन्तर्गत ८० जना हाराहारी नर्सीङ् स्टाफ छन् । कतिपय तीन दशक देखिको अनुभवी समेत रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रसुती बिभाग प्रमुख पोख्रेल भर्खर गर्भवती भएको महिलाहरुमा कुनै समस्या नदेखिएमा पहिलो महिनाको सट्टामा दोस्रो महिनामा आए पनि हुने वताउनुहुन्छ । सामान्य तया गर्भवती महिलालाई हरेक महिना परिक्षण गर्ने गरिन्छ । महिलाको पाठेघरबाट पानी वगेमा, वेथा लागेमा, रगत वगेमा, बच्चा कम चलेमा, उच्च रक्तचाप भएमा भने तत्काल अस्पतालमा आउनु पर्ने उहाँको सुझाब छ ।
बाँकेमा ४७ जनामा कोरोना संक्रमण
एक सय ४५ प्रहरी क्वारेन्टाईनमा
गुल्मीका शिक्षकको कोरोनाका कारण मृत्यु